Maherin'ny 100 ny sary avo lenta maherin'ny 20 cents | Famoronana an-tserasera
Maherin'ny 100 ny sary avo lenta maherin'ny 20 cents
Ny fifandraisana amin'ny fomba mahomby sy haingana kokoa dia azo atao. Ao amin'ny tontolo 3.0 ary indrindra amin'ny haino aman-jery an-tsoratra, ny sary dia mahazo andraikitra mavesatra, tsy amin'ny fomba stolojika na estetika ihany, fa koa mahazo asa tena manazava sy manafintohina. Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia niresaka momba izany izahay ny maha-zava-dehibe ny infografika ho loharano amin'ny tontolo nomerika (raha mbola tsy nanao izany ianao dia mamporisika anao hijery izany, ao no ahitanao antony matanjaka dimy hiara-hiasa amin'ity fitaovana ity).
Androany izay matihanina amin'ny haino aman-jery dia tsy maintsy ho marobe, tsy mazava ary karazana hybrid. Ny mpamorona iray dia mila mampiasa fahalalana mifameno toy ny informatika, ny fametrahana toerana, ny fivelarana atiny ... Ary amin'ny lafiny iray dia fahalalana mifameno izay azo zahana amin'ny sampana rehetra: mpamorona atiny, mpitantana vondrom-piarahamonina ... Antsika rehetra izay ao anatin'ny ny tontolon'ny fifandraisana Tsy maintsy manana fahalalana amin'ny lohahevitra isan-karazany isika, koa azoko antoka fa ny fonosana asehoko anio dia tena hahasoa anao maro: Fonosana infografika miisa 100 avo lenta $ 18 (16 euro), varotra tena izy raha jerena ny haavon'ny vidiny izay hitantsika an-tserasera. Eny, mamaky tsara ianao: Ny môdely tsirairay dia manana vidiny 0,18 dolara (0,16 cents), izay midika hoe fihenam-bidy mihoatra ny 80% raha ampitahaintsika amin'ny vidiny izay ao amin'ny banky sary malaza indrindra. Araraoty ity tolotra tsara ity amin'ny fipihana eo amin'ny rohy manaraka.
1 Inona no ho hitako ato amin'ity fonosana ity?
2 Bonus fanampiny
3 Iza io?
4 Ny Stocko sy ianao: Tombony azo amin'ny fifaninanana
Inona no ho hitako ato amin'ity fonosana ity?
Ambonin'ny zava-drehetra dia hahita loharano maro isan-karazany ianao. Ingimage dia manolotra fonosana maodely maherin'ny 100 hamoronana infografika namboarina tamin'ny fomba fijery hita maso indrindra. Ity tranomboky midadasika ity dia manome lohahevitra maro samihafa izay hanampy antsika hanome fahafaham-po ny filan'ny lahateninay rehetra. Miankina amin'ny atiny izay ilaintsika hisolo tena ny mombamomba anay manaraka ny firafitra samihafa ary manome nuansa samihafa azy. Ny fonosinay dia natao hanehoana ny mombamomba anay amin'ny toe-javatra sy endrika samihafa, izay manome hery lehibe amin'ny hetsika.
Ho fanampin'izany, ny modely rehetra dia aseho amin'ny endrika EPS izay hanampy anay hanamboatra sy hanitsy ny sombiny tsirairay amin'ny fampiononana tanteraka, hanolo ny atiny sy handamina ny sary tsirairay mifanaraka amin'izay ilainay. Ao amin'ity fonosana ity no hahitanao:
Harena isan-karazany toy ny sarintany, kisary, latabatra, kisary, afisy, sary, bokotra, kofehy, zana-tsipika sy sary masina ankoatry ny hafa.
Lohahevitra maro karazana: Manomboka amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, hatramin'ny fanatanjahan-tena sy ny fanatanjahan-tena, ny orinasa sy ny indostria, ny sakafo, ny dia ary ny fitaterana, ny mpanakanto, ny marketing, ny toetrandro ary ny tontolo iainana… Ho be dia be ny lohahevitra azonao raisina.
Mifanohitra amin'izay antenaintsika, ny kalitaon'ny sary dia mahavariana ary ny volavolan-drafitra tsirairay avy dia fitakiana azo antoka ho an'ny mpamakinao hatramin'ny farany niarahany tamin'ny fironana sary an-tsokosoko miaraka amin'ireo vahaolana minimalista sy fananganana miaraka amina endrika kanto.
Toy ny hoe tsy ampy izany, manolotra Bonus ho antsika ity fonosana ity Bola 10 maimaim-poana ao amin'ny ingimage.com. Amin'ny alàlan'ireto mari-pankasitrahana ireto dia hahafahanao maka sary, sary mihetsika, na endritsoratra avo lenta ao amin'ny tranombokiny manana loharano sary mihoatra ny 2,5 tapitrisa. Ho fanampin'izay, ny sary rehetra ao anaty fonosana dia manome anao ny 100% ny zon'ny fampiasana sy ny fitrandrahana na amin'ny sehatra manokana sy ara-barotra amin'ny karazana tetikasa rehetra.
Indrindra amin'ireo masoivoho kely na tetikasa vao noforonina izay kely kokoa ny mpiasa matetika dia misy ny fitambarana amin'ny lafiny asa. Ao amin'ny orinasa lehibe dia misy mpamorona sary miandraikitra ny fiatrehana ny tolo-kevitra hita maso, etsy ankilany, ny ekipa fanontana dia miandraikitra ny famolavolana na ny fanaovana tatitra ny atiny. Na izany aza, ao anatin'ny tontolon'ny mpandraharaha amin'ny ankapobeny ny olona iray dia tsy maintsy miatrika lafiny roa samihafa toy ny fampivelarana atiny amin'ny haitao amin'ny soratra, ny paikadim-pananganana ary koa ny famolavolana ireo kojakoja ilaina sary.
Ity dia mety ho enta-mavesatra be izay azontsika tohanana mora foana amin'ny alàlan'ny famoronana tahiry na tranomboky loharanom-pahalalana sary, saingy ao anatin'ny tsena no ahitantsika ny vidiny mihoa-pampana izay maneho ny fandaniana tsy ampidirin'ny teti-bolantsika. Noho izany dia ilaina ny mianatra misafidy ireo mpamatsy anao amin'ny fomba marani-tsaina indrindra. Raha mahay mikaroka isika dia hahita fitaovana avo lenta amin'ny vidiny mirary. Ireo fonosana dia manome antsika singa maro isan-karazany amin'ny vidiny ambany ambany kokoa. Mba hanomezana hevitra anao dia afaka mividy template infographic amin'ny $ 6 ianao ao amin'ny Graphic River. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny 6 dolara isaky ny singa sy 18 cents isaky ny singa dia ny fotoana sy ny vola ampiasaintsika, ny anton'asa asa voalohany ary miankina amin'izany ny fampiononantsika sy ny tombom-barotra. Ny fividianana fonosana dia hanampy anao hanavao ny fotodrafitrasao amin'ny habetsahana betsaka ary hanao fampiasam-bola kely kokoa. Mazava ho azy, tsy maintsy dinihinao ny singa kalitao, tsy ny fonosana rehetra no manome loharano avo lenta, noho izany ny vokatra ho azontsika dia tsy maintsy dinihina tsara.
Ny Stocko sy ianao: Tombony azo amin'ny fifaninanana
Fananana fitaovana eo noho eo: Ny karazana tetikasa rehetra ataonao dia hanana andian-fitaovana mety ho tafiditra ao amin'ny hevitrao. Raha mamolavola karatra orinasa ianao manana loharanom-pahalalana marobe mifandraika amin'ity karazana tetikasa ity dia ho mora kokoa sy mailaka kokoa ny hamolavola hevitra sy tetika satria efa manana fitaovana isan-karazany afaka manome hevitra ianao.
Leeway: Ny fahamaroan'ny fitaovana dia mitovy amin'ny fahamaroan'ny fahafaha-manao sy ny tsipika fampandrosoana. Arakaraka ny fahafahan'ny asa azonao atao, ny fahalalahana miasa ary ny filaminana lehibe kokoa rehefa manao ny kisary voalohany ianao.
Fahaleovan-tena sy fahaleovan-tena: Ankoatr'izay, amin'ny tsy miankina amin'ny mpamatsy na banky ivelany, dia hanana fahaleovan-tena bebe kokoa sy fahaizana hamaha ny asanao samirery ianao, tsy mandany fotoana na vola amin'ny fikatsahana fitaovana vaovao.
Fomban'ny tenany: Satria ianao mihitsy no misafidy ireo fitaovana handrafitra ny kitapom-bolanao, dia hahafahanao manangana tahiry ara-pitaovana mifanaraka amin'ny fomba fiasanao sy mifantoka amin'ny fombanao amin'ny maha mpamorona anao.
Avy eo avelako ianao hifantina kely amin'ireo fitaovana ho hitanao ato amin'ity fonosana ity sy ny rohy mividy sy miditra:
Kitapo infografika avo lenta 100.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Maherin'ny 100 ny sary avo lenta maherin'ny 20 cents